नेपाल चिकित्सक संघले ४८ घन्टाभित्र सरकारले डा.गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन नगरे देशभरीको आकस्मिक बाहेकको सबै सेवा ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पाठेघरको संक्रमण खेप्दै महिला
जिल्लाकी ४२ वर्षीया सुनमाया तामाङलाई लामो समयदेखि गुप्तागं चिलाउने, पोल्ने समस्या छ । विशेषगरी महिनावारीको समयमा यस्तो समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।
एग्जिमा (दाद) हेर्दा सामान्य जस्तो देखिने छालाको रोग हो । जुन प्राय, धेरै जसो व्यक्तिमा देखिन्छ । यस रोगबाट पीडित रोगीलाई यस्तो लाग्दछ कि यो रोग कहिले पनि ठिक हुनेवाला छैन । तर, यस किसिमको धारण भने राख्नु ठिक होईन । होमियोप्याथिक चिकित्साबाट यसको उपचार संभव छ ।
वर्षायाममा हुने विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामध्ये एक ‘एमिवायसिस’ यति बेला मुलुकका लागि मुख्य समस्या बनेर देखिएको छ । एमिवायसिस भनेको ‘एन्टामोविया हिस्टोलाइटिका’ नामक अमिबाले गर्दा ठूलो आन्द्राको श्लेष्मिक झिल्लीमा हुने सुन्नाइ हो जसबाट आउँ, मासी, झाडापखाला देखा पर्छ । यसलाई ‘एमेविक डिसेन्ट्री’ समेत भनिन्छ ।
पिँडालुलाई स्वास्थ्यका हिसाबले कम आँक्नुभएको छ भने, तपाईं गलत हुनुहुन्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदा कम छैनन् । पिंडालुमा फाइबर, प्रोटिन, क्याल्सियम र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोडियमको राम्रो मात्रा पाइन्छ ।
हाम्रो शरीरको फोहोर, काम नलाग्ने विकार पिसाबको माध्यमले प्राकृतिक तवरले बाहिर निस्किन्छ । पिसाबको रंग र यसमा हुने परिवर्तनले समेत हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिबारे संकेत दिन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने अल्जाइमर्स रोगको बारेमा आम नागरिकमा मात्र नभएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्तिहरूमा पनि चेतना अत्यन्त न्यून छ, जसका कारण स्मरण शक्तिसँग सम्बन्धित यो समस्या केवल मानसिक रोगको रूपमा मात्र बुझिँदै आएको पाइन्छ ।
तपाईंका बालबालिका मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर वा अन्य माध्यमले अनलाइन वा अफलाइन गेम (खेल) मा रमाइरहेका हुन्छन् कि ? स्कुलबाट आउनासाथ उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो काम गेम खेल्नु नै हुन्छ ? तपाईंले सम्झाउँदा समेत लुकेर खेलिरहेका हुन्छन् ?
मुटु रोगीलाई एक्लोपना खतरनाक
एक्लोपना कसैका लागि पनि राम्रो मानिँदैन । अझ मुटु रोगीका लागि त घातक नै हुन्छ । एक्लोपनाले उनीहरूमा मृत्युको खतरा दोब्बर पार्ने हालै गरिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, मुटु रोगसँग जुधिरहेका महिला–पुरुष दुवैमा एक्लोपनाको अनुभूति धेरै घातक हुन्छ ।
देब्रे कोल्टो सुत्नु लाभकारी
तपाईं सुत्दा कुन कोल्टो सुत्ने गर्नुहुन्छ ? जुन मन लाग्छ त्यहीचाहिँ नभन्नुहोला । यद्यपि सुत्ने तरिका व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ । बिर्सन नहुने कुरो के हो भने, सुताइको मुद्राले स्वास्थ्यमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले यसमा सचेतता अपेक्षित मानिन्छ ।
सरिफा मनसुनी फल हो । यो वाहिरवाट कठोर भए पनि भित्र धेरै नरम हुन्छ । अग्रेजीमा यसलाइ कस्टर्ड एप्पल भनिन्छ । किम्वदन्ती अनुसार सिता वनवासमा रहेको समय यो फललाइ धेरै रुचाउने गर्थिन । त्यसैले यसलाइ सिताफल समेत भनिन्छ ।